बहुमुल्य जीवन (एकपटक सबैले पढाैं) - Lekhapadhee Motivational Story
लेखापढी ९ असार २०७७, मंगलवार १३:२९
एक पटक ठुलो सेमिनार मञ्चको बीचमा एक जना विद्वान् व्यक्ति हातमा १००० रुपैँया लिएर उभिएका थिए । उक्त सेमिनारमा उपस्थित सयौ मान्छेहरु तिर हेर्दै भन्नु भयो – मेरो हातमा भएको यो १००० रुपैँया यहाँ कसैलाई दिन चाहन्छु त्यसकारण हात उठाएर भन्नुहोस कसलाइ चाहिन्छ ?
त्यहाँ उपस्थितहरु १-२-३.. जना गर्दै क्रमसः सबैले हात उठाए, उक्त एक हजार रुपैँया सबैलाई चाहिने भयो। सबै जनाले हात उठाए । मन्चमा उभिएका ति व्यक्तिले उक्त एक हजार रुपैँया नोटलाइ दुवै हातले खुम्च्याइ दिए र फेरी सोधे यो कच्याककुचुक परेको पैसा कसलाइ चाहियो ?
फेरी त्यहाँ सबैले आफ्नो हात उठाए, त्यो खुम्चिएको पैसा भए पनि सबैलाई चाहिने देखियो ।
मन्चमा उभिएर उक्त दृश्य हेरिरहेका ती व्यक्तिले हातमा रहेको एक हजारको नोटलाइ भुइँमा खसाले अनि खुट्टाले दबाएर अझ कच्याककुचुक पारे । अनि फेरी सबै तिर हेर्दै भने यो मेरो खुट्टाले च्यापेर बिग्रिएको पैसा कसलाई चाहियो ?
यो पटक पनि सबै जनाले हात उठाए । त्यो पैसा सबै जनालाइ चाहिने देखियो।
तब मन्चमा उभिएकाका ति विद्वानले भने – “आज तपाईहरुले धेरै बहुमुल्य कुरा सिक्नुभयो, जुन तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्नु हुन्न । यो एक हजारको नोट जति सुकै कच्याककुचुक, फोहोर भए पनि यसको आफ्नो मूल्य घटेको छैन । मैले खुट्टाले च्यापे पनि यो एक हजार नै हो ।”
हाम्रो दैनिक जीवन यो पैसा जस्तै भईरहेको हुन्छ । तपाइँहरु बीचमै पनि धेरै जनाको जीवनमा दु:ख परेको होला । धेरै जना दैनिक रुपमा काम गर्दा गर्दै थाक्नु भएको होला, अपमान सहनु परेको होला, आफुले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन होला । ब्यापार- ब्यबसाय वा आफुले लगानी गरेको क्षेत्रमा नोक्सानी भएको हुन सक्छ तर यो सबै कठिन समय र परिस्थितिलाइ सामना गर्दा गर्दै आफ्नो जीवन मुल्यहीन वा असफल सोच्नु भएको छ भने अब नकारात्मक कुरा सोच्न छोड्नुस ।
जसरी हातमा रहेको एक हजारको नोट जतिसुकै फोहोर, कच्याककुचुक भए पनि एक हजार नै हो, मूल्य घटेको छैन भने तपाइँ केहि समयको लागि असफल हुँदा जीवनको मूल्य घटेको वा आफु असफल भएको सोच्न बन्द गर्नुहोस ।
बहुमुल्य जीवनको अर्थ बुझ्नुहोस, मुल्यवान बन्नुहोस ।